स्वस्थ नेपाल Healthy Nepal: नयाँ पुस्ताका चुनौती
(२७ फागुन, २०६९ को 'हिमाल'मा अन्तरपुस्ता संवाद कोलममा प्रकाशित डा. सरोज धितालको लेख। )
सुदूरपश्चिमका पहाडहरुमा छोटो समय बिताएर म भर्खरै फर्केको छु। त्यहा हुन्जेल मनभित्र कतै न कतै दुखिरह्यो। हाम्रो देशको स्वास्थ्यसेवाको बेहालको साक्षी त हामी सबै छौं नै। तर विकट पहाडी गाउँमै बसेर नजिकबाट त्यसलाई हेर्दा हुने पिडाबोध चर्को हुन्छ। पत्याउछौ तिमी? त्यहाहुन्जेल मैले तिमीलाई सम्झिरहें, साथीहरुसँग तिम्रै कुरा गरिरहें। तिमीलाई सम्झनुको कारण हो- भिन्दाभिन्दै पुस्ताका हामी दुईबिच स्वास्थ्यको अवधारणा, स्वास्थ्यसेवा, स्वास्थ्य प्रणाली, सामाजिक दायित्व आदीबारे कुरा हुँदा जहिल्यै पिडाबोध गर्थ्यौं। नयाँ पुस्ताका डाक्टरहरुको सकारात्मक सोच, जीवनोन्मुख सम्भावना अनी सामाजिक उत्तरदायित्वबोधको नयाँ रुपलाई हेर्ने झ्याल भएका छौ तिमी मेरोनिम्ती। र, म त्यो झ्यालबाट तिम्रो पुस्ताका असल डाक्टरहरुसँग सम्वाद गर्न लालायित छु।
'साइबर स्पेस'मा छरिएका विभिन्न सामाजिक सन्जालमा तिम्रो अभीव्यक्तीहरु वा सामाजिक उत्तरदायित्वबोधले भरिएका तिम्रा सार्थक ब्लगहरु पढ्दा मलाई यस्तो लाग्छ- हामी बाँचेको चिसो यथार्थमा तिमीले आशाको सिरक बनेर मेरो हृदयलाई न्यानो दिइरहेका छौ। कुनै बेला यस्तो लाग्छ, यथार्थको कठोरतामा ठिहिर्याएर, जमेर निश्चल भएका मेरा सपनाहरु फेरी बौरिएर, पखेटा हालेर उड्नेछन्। त्यो पखेटा मैले पाएको तिम्रो पुस्ताबाट हो।
तर, कुरुप यथार्थ र सुन्दर सम्भावनाको घामछाँयामा बाचिरहदा मलाई असाध्यै पिर पनि लाग्छ- कहीं तिमी र तिम्रो पुस्ताका अनगिन्ती असल डाक्टरहरुको सुन्दर भावना र त्यो सामाजिक उत्तरदायित्वबोधको क्षय त हुँदैन? मेरो युवा मित्र, मैले विगतमा त्यस्तो क्षय र स्खलनको पिडा भोगेको छु। अहिले पनि कुनै बेला यस्तो लाग्छ, म तुहिएका मेरा अनगिन्ती सुन्दर सपनाका लासहरु माथि बाचिरहेको छु। त्यसैले भित्रैदेखी म कामना गरिरहेको छु- तिम्रो पुस्ताका असल मानिसहरुको कुनै पनि सुन्दर सपना नतुहियुन्।
झट्ट हेर्दा तिम्रो पुस्ताका डाक्टरहरुलाई सजिलो भएजस्तो लाग्छ। हामी डाक्टर भएको बेला अहिलेको भन्दा धेरै कुरामा गार्हो थियो। देशमा अहिले जती मेडिकल कालेजहरु थिएनन्। काम गर्नलाई सरकारी अस्पताल मात्र थिए। एकाध मिसन अस्पतालहरुमा थोरै मात्र नेपाली डाक्टर अटाउथे। सरकारी अस्पतालमा काम गर्नु र कुनै औषधी पसलमा साइनबोर्ड टाँसेर प्राक्टिस गर्नु अधिकांश डाक्टरहरुको स्वाभाविक नियती हुन्थ्यो। उच्च शिक्षा र विशेषज्ञताका लागि पनि अहिले जस्तो सम्भावनाहरु थिएनन्। स्मार्ट फोनमा सयौ किताब बोकेर हिंड्न सक्दैनथे त्यस बखतका युवा डाक्टरहरु। त्यो हेरी अहिलेका नयाँ डाक्टरहरुलाई अनगिन्ती सुविधा र सम्भावना प्राप्त छन्।
तर, गहिरिएर हेर्दा सत्यको अर्को पाटो पनि देखिन्छ- हाम्रो पुस्ताका युवा डाक्टरलाई भन्दा कतिपय कुरामा तिम्रो पुस्तालाई गार्हो भएको छ। तिमीहरुले धेरै नयाँ चुनौतिको सामना गर्नु परिरहेको छ। देशका कुनाकन्दरामा अझै पनि आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पुगिसकेको छैन। अर्कातिर झन्-झन् सानो हुँदै गएको विश्वमा छौं हामी। संसारका कुन कुनामा के भईरहेको छ भन्ने कुराबाट अनभिज्ञ रहने स्थिती छैन। विज्ञान प्रविधिको यो दौडमा हामीले पनि दगुर्नु नै छ। नत्र झन् पछी परीन्छ।
अर्थात्, आधारभूत स्वास्थ्यसेवाको आवश्यकता समेत पूरा नभएको यो यथार्थमा टेकेर हामीले सोच्नु र काम गर्नुछ, प्रविधिका उपलब्धीला हाम्रो हक सुरक्षित पार्नुछ। यो चुनौतीको सामना तिम्रो पुस्ताका डाक्टरहरुले जमेर गर्नुपर्ने भएको छ। गार्हो छ यो काम। तर, जुन युगमा तिमी एउटा गरिव देशको डाक्टर बनेका छौ, तिमीले यो चुनौतीको सामना नगरि धरै छैन।
यो देशमा जन्मेका कारण वा अघिल्लो पुस्ताले जिम्मेवारीको थुप्रो छोडेका कारण मात्रै यसो भएको हैन। विज्ञान प्रविधीको बिकास ईतिहासको कुनै कालखण्डमा भन्दा अहिले तिव्र गतिमा भईरहेको छ। प्राप्त सिपहरु छिटो-छिटो पुराना हुँदै छन्। संसारको जुनसुकै देशको, जुनसुकै कुनाको कुनै पनि समाज यो दौडमा एकैछिन मात्र सुस्तायो भने दशकौं पछाडि पर्छ। त्यसबाट हामी अलग हुनसक्ने कुरै भएन।
समिर, भावी पुस्ताको निम्ती जीवन आफ्नो भन्दा सजिलो बनाइदिने प्रयत्न गर्नु जुनसुकै पुस्ताका, जुनसुकै पेशाका मानिसको स्वधर्म हो। अस्वाभाविक परिस्थितीमा बाहेक कुनै न कुनै किसिमले यसो भईरहेकै पनि हुन्छ। तर हरेक नयाँ पुस्ताले सामना गर्नुपर्ने चुनौती भने झन्- झन् ठुलो हुँदै जाने रहेछ। र, अहिलेका चुनौतिहरुको सामना गर्न तिम्रो पुस्ताका डाक्टरहरु सक्षम छन् भन्नेमा म विश्वस्त छु।
हरेक पुस्ताका स्वास्थ्यकर्मी र नीतिनिर्माताहरु मानव स्वास्थ्यलाई कसरी बुझ्ने भन्ने प्रश्नसँग जुधिरहेका छन्। मानव स्वास्थ्यलाई जीव विज्ञान र चिकित्सा विज्ञानमा उभिएर यान्त्रिक दृष्‍टिकोणले एउटा 'स्थिती'का रुपमा मात्र हेर्ने कि समग्र सामाजिक परिप्रेक्ष्यमा मानिस र जगतबिचको गतिशिल सम्बन्धका स्वरुपमा बुझ्ने भन्ने विवाद अहिलेको हैन। तिम्रो पुस्ता पनि यो बहसबाट अलग हुनसक्दैन।
मलाई थाहा छ, यो प्रश्नको उत्तर तिमीले आफ्ना गतिविधी र अभिव्यक्तीबाट दिइसकेका छौ। तर समयले तिमीबाट शायद यो भन्दा बढी कुरा माग गरिरहेको छ। ६/७ दशकअघी विश्व स्वास्थ्य संगठनले दिएको 'स्वास्थ्य'को परिभाषा अहिले असान्दर्भिक हुन थालिसकेको छ। यस बारेमा पनि गहन विमर्श आवश्यक भईसक्यो नि हैन?
समिर, धेरै छ कुरा गर्नु। धेरै छ काम गर्नु। अहिलेलाई भने यत्ती नै।
तिम्रा हरेको सुन्दर सपनाहरु साकार होउन् भन्ने कामनासहित।
Kanchan March 9, 2013 at 11:35 AM
Samir March 9, 2013 at 6:56 PM